Baahida Jump: Suuqgeynta Saadaasha iyo Sirdoonka Tartan | Martech Zone
Axad, Maarso 6, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Internetku waa ilo cajaa’ib leh oo xog ah, haddii la qodo, soo saari kara aqoon fara badan. Laakiin sida laga soo xigtay Sahanka CMO ee sanadkan, seddex meelood oo meel oo suuqleyda ah ayaa awooda cadee saameynta kharashaadkooda suuq geynta, kala badh kaliya ayaa awooda inay helaan wax fiican tayada tayada ee saameynta, iyo ku dhowaad 20% ayaa awood u leh cabir wixii saameyn ah wax alla wixii. Layaab malahan suuq geyntaas Analytics kharashyada ayaa lafilayaa inay kordhaan 66% saddexda sano ee soo socota.
Maaddaama boqolleyda guud ahaan safarrada macaamiisha iyo iibsashada ganacsigu ay u haajiraan khadka tooska ah, suuqleydu waxay aqoonsan yihiin inay u baahan yihiin inay farriin ka helaan horteeda dhagaystayaasha la xiriira halka ay joogaan. Suuqgeynta maareynta, suuqgeynta warbaahinta bulshada, iyo suuqgeynta saameynta saameyntu way sii kordheysaa iyadoo marinnada kale ee suuqgeynta ay gaarayaan heer buuxa
Baahida Jump waa horumar weyn xagga sirdoonka suuq geynta saadaalinta, u sahlaysa suuqleyda inay soo bandhigaan fursadaha suuqgeynta, la socoshada dhaqdhaqaaqa tartameyaasha iyo dardar gelinta taraafikadaada iyo beddelkaaga. Si dhakhso leh u fiiri shaashadooda waxay ku siineysaa aragti guud oo ku saabsan muuqaalkaaga gudbinta iyo fursadaha, oo ay ku jiraan jiilka hogaaminta, wararka iyo fursadaha PR, fursadaha eCommerce, fursadaha gacansaarka, baloogyada iyo fursadaha mawduucyada, iyo inbadan.
Sirdoonka Suuqgeynta Mawduuca
Isticmaalka DemandJump agabkiisa sirdoonka, waxaad la socon kartaa qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ay tartamayaashaadu soo saarayaan, sida ay u shaqeyneyso, iyo xitaa aqoonsashada ilaha taraafikada gudbinta ee ku saabsan waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Tani waxay kaa caawin kartaa inaad tilmaamto saamileyaasha iyo tixraacyada bogagga kuwaas oo sidoo kale u kaxayn doona taraafikada taraafikadaada. Barxadda xitaa waxay siisaa aaladaha maareynta xiriirka si aad u ilaaliso una ilaaliso xiriirada muhiimka ah ee saamayntaada.
Suugada sirta ah ee ka dambeysa Baahida Jump waa aruurinta fikradaha muhiimka ah ee tartanka ee aad ka xaroon karto barxadda si aad u hagto waxa aad ka kooban tahay iyo istiraatiijiyado xayeysiin ah. Qiyaas inaad haysato suuq geyn suuq geyn ah oo aad ku bixin karto shabakado badan oo xayeysiis ah, soo bandhig shabakadaha xayeysiiska, kafaalaqaadka iyo kanaalo kale. DemandJump ayaa kaa caawin kara inaad tilmaantid waxa ilaha keenaya taraafikada iyo kaqeybgalka, ma ahan oo keliya shabakadaha xayeysiiska ee ay wadaan. Xitaa waxay siinayaan algorithm gooldhalinta u gaarka ah si ay mudnaanta u siiyaan fursadaha dhali doona saameynta ugu weyn.
Fahamka xayeysiinta suuq geynta tartamayaashaada waxay fulinayaan istiraatiijiyadooda waxay kaa caawin kartaa inaad fahanto dhuftoyinka aad ubaahantahay inaad sidoo kale ku tartantid.
Iyadoo Baahida Jump, Suuqgeyaasha internetka ee nooc kasta oo ganacsi ah - laga bilaabo ganacsiga elektaroonigga ah, daabacaadaha, ganacsiga-ganacsiga, illaa kuwa aan macaash doonka ahayn waxay ka heli karaan fikrado qiimo leh istiraatiijiyaddooda suuq-geynta ee kanaalka badan. Eeg meesha aad isku uruurinayso kuwa kula tartamaya iyo talaabooyinka ay tahay inaad ku korto.
Dalab Khibrad Ku bood ficil!
Shaacinta: Waxaan si dhow ula shaqeynayay aasaasaha Shawn Schwegman sannadihii la soo dhaafay, waxaan hirgelinay xalka dadaalkeenna, waxaanna la abuurayaa iskaashi joogto ah Baahida Jump.
Tags: sirdoonka network admarketing affiliatesirdoonka tartankaContent Suuqdalab boodiddalabsirdoonka suuq geynta dijitaalkae-commerceecommerceraadso saameynsida loo helo saamileyaalsaameynmadal saameyn lehjiilka ledsirdoonka suuq geyntagudbinta wararkafalanqaynta saadaalintacaqli saadaalinsuuq geynta saadaalintaxiriirka dadweynahagaadiidka gudbinta